I-Semalt inikeza iiNdaba eziNcedo kwi-Top 5 Scrapers yeWebhu
ayikwazi ukuyiqhawula okanye ukuyifake kakuhle. Nangona ezinye izayithi zenza imizamo yokubonisa idatha kwiifom ezicocekileyo nezicwangcisiweyo, abanye abakwazi ukubonelela nayiphi na i-web-crawling okanye indawo yokucoca idatha. Kungenxa yoko kuya kufuneka sifikelele kwi-crawlers yeebhanki, abavukuzi, kunye ne-scrapers. Apha sixoxile ngezona zixhobo ezinhlanu kule ndawo.
I-Webhose.io isenza ukuba sifumane idatha yenkcazelo yangempela kwimithombo ye-intanethi nakwiisayithi. Inxalenye eyona nto kukuba le migodi yenkqubo kwaye iyakhupha iziza ngokukhawuleza ize inikeze idatha kwifom ecocekileyo efanelekileyo. Kwakhona kusenza sikwazi ukukrazula idatha ngokusekelwe kumagama abo, amagama, iilwimi kunye nendalo. Iziphumo zokugqibela zingatholakala ngefom yeifayile ze-XML, ze-RSS kunye ne-JSON. Nangona le nkqubo ayikho iindleko, ungafikelela kwinguqu ye-premium yayo ukuba ufuna ukusebenzisa iWebhose.io ngenjongo zorhwebo. Isicwangciso esikhokhelwayo siyakunceda ukuba uthumele izicelo ezininzi ze-HTTP kumncedisi osisiseko, okwenza kube lula kuwe ukuba uphawule kwaye udibanise iziza.
I-scrapy iyisisombululo esinamandla nesimangalisayo kunye nesakhelo sokukhawulela kwi-intanethi. Inxalenye yayo ephambili kukuba le nkqubo ixhaswa luluntu lweengcali, onokungena kulo kumnxeba ngeengcebiso ezifanelekileyo kunye
3. I-Hub yokukhwabanisa:
Ukuba awukhululekile ngeekhowudi, ukukhupha i-Outwit I-Hub iya kukunika isilathisi esibonakalayo esiluncedo, okwenza kube lula kuwe ukuba ukhawuleze kwaye ulondoloze idatha. I-version yayo eyabanjwe ifumaneka kwisiza esisemthethweni, kwaye inguqulelo yamahhala inokukhutshwa kuyo nayiphi na isitolo se-intanethi.
5. I-Web Scraper ye-Chrome:
Ukuba unayo i-Google Chrome njengesiphequluli sakho sewebhu, kufuneka ukhethe i-Web Scraper. Yinkqubo ebalaseleyo yokukhawulela kunye neyezimayini evumela ukuba wenze izikhalazo zeeblogi zakho kunye newebhusayithi yezoshishino. Ufuna ukukhuphela, faka kwaye ungeze lo msindo kwi-Chrome isiphequluli uze ubone indlela iza kukhishwa ngayo idatha kwiiwebhusayithi zakho. Unokungenisa ii-sitemaps okanye usebenzise iziboniso zayo ukuphucula ukujonga nokusebenza kwewebhusayithi yakho. Iyakusindisa idatha yakho ekhishwe kwiifayile ze-CSV okanye kwifolda yayo yoLondolozo.